Su’aal: Waa maxay qorshaha badbaadadu/ jidka badbaadadu?
Jawaab: Maa baahantahay? Maaha muuqaal ahaan ma baahantahay, laakiin baahi ma u qabtaa wax kale oo nolosha ah? Wax kale ma jiraan naftaada oo weli u muuqda inaadan ka qancin? Haddeey sidaas tahay, ciise waa jidka! Ciise wuxuu yiri, anigaa ah rootigii nafta. Ruux kastoo ii yimaada weligiis ma baahanayo, qof kastoo I rumeeyaana weligiis ma oomayo. (John 6:35)
Marnna weligaa ma dareentaa in noloshii lagaa xirtay, mA isku dayday albaabo badan? Oo ma aragtay waxa ka dambeeyaa yihiin marnaan iyo macno la’aan? Ma raadineysaa albaab laga galo nolol qanaaco leh/buuxda? Haddey sidaas tahay, waddadu waa ciise.
Ciise wuxuu ku dhawaaqay, anigaa albaabkii ah, qof kastoo aniga ii maraana waa la badbaadin, wuu soo gali wuuna bixi, wuxuuna heli guul/barwaaqo (John 10:9) Dad kali mar kasta ma ku hunggowdaa? Xiriirradaadu mar kasta ma ahaayeen bohol iyo wax maran? Ma mooddaa in qof kastaaba isku dayayo inuu kaa faa’ideysto? Haddey sidaas tahay, ciise waa jidka/waddada, ciise wuxuu yiri, waxaan ahay ari ilaaliyaha fiican, ilaaliyaha fiicani naftiisuu idihiisa u huraa,, waxaan ahay ari raace/ilaaliye wanaagsan/fiican, waan aqaan idahayga, idahayguna wey I yaqaannaan” (john 10:11, 14). Maad ka fekertaa/yaabantahay waxa dhici doona noloshaan ka dib? Ma ka daashay inaad ku/u noolaatid noloshaada waxyaabo/waxyaalo qurma ama maareysta/daxaleysta? Mararka qaarkood ma ka shakisaa iney nolosho macno leedahay? Ma dooneysaa inad noolaatid markaad dhimato ka dib? Haddey sidaas tahay, ciise waa jidka. Ciise wuxuu ku dhawaaqay, : waxaan ahay dib u soo noolaashda iyo noloshaba., Qof kasta oo I rumeeyaa wuu noolaan, in kastoo uu dhintay. Qof kastoo nool/noolaada oo aniga I rumeeyaana weligiis ma dhimanayo (John 11:25-26). Jidku waa maxay? Runtu waa maxay? Nolosh waa maxay? Ciise wuxuu ku jawaabay, “ jidku waa aniga, runto waa aniga, Noloshu waa aniga. Qofna uma yimaado aabaha haduusan aniga I soo marin. (John 14:6).
Baahida aad dareensantahay waa baahi ruuxi ah, waxaana keliya oo buuxin kara ciise. Ciise waa kan keliya oo qaadi kara mugdiga, Ciise waa albaabka loo maro nolol lagu qanco. Ciise waa saaxiibka iyo ilaaliyaha aad daydayeeysey. Ciise waa nolosha, noloshan iyo tan danbaba. Ciise waa jidka badbaadada. Sababta aad baahida u dareemeeysa, sababta aad u dareemeyso inaad ku dhex luntay mugdi, sababta aad u weysantahay nolol macna leh, waa inaad ka go’day ilaahay.
Baybalku wuxuu noo sheegayaa inaan dhamaanteen damboowney/dembi galnay, oo aan sidaas darteed ka go’nay ilaahay (Ecclesiastes 7:20” Romans 3:23) Marnaanta aad ka dareemeysid wadnnahaaga waa alle oo ka maqan naftaada. Waxaa naloo abuuray inaan ilaahay xiriir la yeelanno, dambigayaga dartiis waan ka go’nay xiriirkaas, kaba sii daran, dambigayagu wuxuu na dhaxalsiinayaa inaan alle ka go’naano nolosha dambe oo dhan, noloshaan iyo tan kaleba. (Romans 6:23; John 3:36).
Dhibaatadan side wax looga qaban karaa? Ciise waa jidka. Ciise dambiyadayadii asagaa qaatay (2 corinthians 5:21) ciise meeshayadii buu ku dhintay (Romans 5:8) asagoo qaadanaya ciqaabahayagii aan muteysannay. Saddex maalmood ka dib dhimashadiibuu ka soo kacay, asagoo caddeynaya siduu uga guuleystay dambi iyo geeri (romans 6:4-5) Muxuu saa u sameeyey? Ciise su’aashaas asagaa ka jawaabay, jacayla kan ka weyn ma jiro, inuu naftiisa u huro saaxiibadiis (John 15:13) Ciise wuxuu u dhintay si aan annagu u noolaanno, haddaan asaga aaminnana, rumeynnana iney geeridiisu ahayd mag annaga naloo ka baxshey dambiyadayadii, danuubtayadii oo dhan waa la cafiyey, waana la mayray, markaasna baahidayadii ruuxiga ahayd waan nalaga haqabtiray, nala ka ba’shey. Nalalki/Laydhadhkii waa la shidi/daari doonaa. Waxaan marin u heli doonnaa nolol lagu qanco. Waxaan garan doonaa saaxiibkayaga u fiican oo runta ah iyo ilaaliyaha wanaagsan. Waxaan ogaan doonnaa inaan nolol heli doonno markaan dhimanno ka dib. Dib u soo noolaan jannada dhexdeeda oo waarta, lana joognno ciise.
Ilaahey siduu adduunka u jecel yahay wuxuu na siiyey wiilkiisii keli ahaa, qof kii rumeeyaana ma ba’ayo/baab’ayo ee nolol waarta buu heli (John 3:16).